Umfana ufuna ukukuanga, futhi awuqondi amacebo? Yini indoda efuna ukumanga owesifazane ibonakala?
Okuphawulekayo kokuziphatha komfana ofuna ukumanga intombazane.
Sicabanga ukuthi akekho ozophikisana ngokuthi kusukela ekumeni inhliziyo iqala ukushaya kaningi, ikhanda liyinkimbinkimbi futhi imilenze ibuthakathaka. Konke ngoba kungenye yezibonakaliso ezinkulu kanye ezivame kakhulu zokuzwelana nokuqala kwemizwa yothando. Kodwa kwenzeke ukuthi intombazane ididekile: njengomfana futhi inika izibonakaliso zokunakwa, kodwa ngaphambi kokumanga loludaba aluze lufike. Yini engalungile? Mhlawumbe unamahloni noma angaqapheli ngokugcwele lokho akuhlangenwe nakho. Ukuze ungacabangi nge-chamomile, sincoma ukufunda isihloko sethu. Kulo, siqoqe izimpawu ezivame kakhulu ukuthi umfana ufuna ukukunanga.
Uma umfana efuna ukumanga intombazane, kuyini ukuziphatha kwakhe?
Uma insizwa ikubona, inzima ukusiza, yenza izincomo futhi izama ukuyithinta ngazo zonke izindlela, lokhu kubonisa isifiso sakhe sokuthuthela ezingeni eliphakeme lokuxhumana. Kungenzeka ukuthi angathanda ukukuanga. Uma ungaqiniseki, qaphela ukuziphatha kwakhe ngokucophelela. Into yokuqala ezoyikhipha ukubukeka. Umuntu ozwa uzwela, ubheka into enesifiso sakhe emehlweni okwamanje okungenani imizuzwana 2-3. Kodwa khumbula, insizwa enamahloni kakhulu, ngokuphambene nalokho, izama ukuvula amehlo akhe, ukuwaphonsa, bese uwaqoqa futhi.
Uphawu lwesibili ukunyakaza kwakhe. Uma umuntu engathandi ukuthola ukusuka kuwe, izenzo zakhe zizoba mahhala futhi zikhululekile. Lowo ozangeyo, ngokuphambene nalokho, uzovinjelwa kancane futhi agxilwe, kodwa uzama ukukuthinta. Ngesikhathi sokumanga okungenzeka, insizwa ingase iqale ukudumazeka, noma ingayeki ukukhuluma ngazo zonke izinhlobo zezinto ezingabalulekile. Yebo, ngokweqile, uma umfana efuna ukumanga. Inkomba enkulu - injabulo, engabonakalisa ngendlela engenangqondo.
Intombazane kufanele iziphatha kanjani uma ibona ukuthi indoda ifuna ukumanga?
Uma esinye sezibonakaliso ezingenhla silingana noma wena ngokwakho unomuzwa wokuthi unesifiso sensizwa, kukhona amathiphu ambalwa abalulekile azosiza ukugwema ukukhungatheka nokucasuka.
Ngisho noma enamahloni, awudingi ukuthatha konke ezandleni zakho bese uthatha isinyathelo sokuqala. Shiya leli lungelo ngensizwa, naphezu kokuthi siphila esikhathini sokulingana. Into kuphela ongayenza ukucindezela ezenzweni ezithile noma ubonise ukuthi awukhohlwa ukuwanga.
Zama ukungashiyi amehlo akhe. Ukumomotheka ngobumnene nangokwethembeka - kufanele kukhulumisane. Zama ukuyithinta ngandlela-thile ngendlela ekhethekile. Isibonelo, ngobumnene kodwa ngokuqinisekile ubambezela entendeni yesandla noma ngokucophelela ukhiphe umkhiqizo ezembatho zakhe.
Izwi lakho kufanele libe nokuzolile, lumnene futhi lithande, njengokungathi ukhuluma nengane. Kodwa ungadluli. Uma konke kuhamba kahle ngeke nje uxolele umfana ngendlela efanele, kodwa uzophinde uthule kancane.
Sithemba ukuthi amathiphu ethu azokusiza ukuthi ungagcini nje ukumangazela okufisayo kumuntu omuhle, kodwa futhi, mhlawumbe, ukwakha ubuhlobo obunothando naye. Kusukela manje, akudingeki ukuba uzibuze ukuthi ungaqonda kanjani ukuthi umfana ufuna ukukuanga.
Imithetho yokuziphatha ngosuku lokuqala
Ungathanda kanjani usuku lokuqala umuntu?
Amaphutha ajwayelekile kakhulu abesifazane abenza ngesikhathi sokudlala ngothando
Yeka ukuthi kufaneleka kanjani ukusho ukuncoma kumuntu wesifazane
I-Horoscope ngoNovemba 2017 - owesifazane-ama-Aries - avela kuTamara Globa no-Angela Pearl
I-pizza enezikhonkwane nezinhlanzi ezivuthayo
Ukuqhathaniswa kukaJessner: ubufakazi, okuyinhloko yenqubo, izinzuzo nezingozi
Ungakhetha kanjani isambulela?
Ikhalenda lama-eclipses alanga nenyanga nango-2015
Izaqathe ngesiKorea (izaqathe zaseKorea)
Isaladi ngamakhowe kanye neklabishi
Indlela yokukhetha nokugqoka amalensi oxhumana naye
Imidlalo ejabulisayo yengane encane
Kissel kusuka ku-currant emnyama